सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका विश्वकै पहिलो व्यक्तिको मृत्यु • Nepal's Trusted Digital Newspaperसुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका विश्वकै पहिलो व्यक्तिको मृत्यु • Nepal's Trusted Digital Newspaper
सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका विश्वकै पहिलो व्यक्तिको मृत्यु
बिहिबार, फाल्गुन २६, २०७८
काठमाडौँ — विश्वमै पहिलो पटक प्रत्यारोपणमार्फत सुँगुरको मुटु प्राप्त गरेका अमेरिकी नागरिक डेभिड बेनेटको मृत्यु भएको छ । सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणमार्फत प्राप्त गरेको दुई महिनापछि उनको मंगलबार अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालय, बाल्टिमोर अस्पतालले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार केही दिनदेखि बेनेटको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको थियो । अस्पतालले बेनेटको मृत्युको ठोस कारण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
बेनेटको शल्यक्रियामा संलग्न बाल्टिमोर अस्पतालका चिकित्सक डा. बार्टली ग्रिफिथले भनेका छन्, ‘बेनेटको निधनले हामी मर्माहत भएका छौं । उहाँ एक साहसी र भद्र बिरामी हुनुहुन्थ्यो । जो जीवनको अन्त्यसम्म पनि लडिरहनुभयो ।’
बेनेटका छोरा डेभिड बेनेट जुनियरले अपरेसनले काम गर्दैन भन्ने थाहा भए पनि बुवाले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ खोजमा सहयोग पुर्‍याउन तयार भएको बताएका छन् । उनले दुई महिनाअघिको शल्यक्रियालाई ‘जादु’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘हामी हरेक नवीन क्षण, हरेक पागल सपना र हरेक अनिदा रातहरू ऐतिहासिक प्रयासका लागि थिए भन्ने कुरामा आभारी छौं,’ अस्पतालद्वारा जारी वक्तव्यमा बेनेट जुनियरले भनेका छन्, ‘हामीलाई आशा छ, यो आशाको सुरुवात हो अन्त्य होइन ।’
त्यस्तै मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयका एनिमल–टु ह्युमन ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम’ का निर्देशक डा. मुहम्मद मोहिद्दीनले बेनेटप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै भनेका छन्, ‘बेनेट साहसी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको योगदानबिना यो प्रक्रिया असम्भव थियो । सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणका लागि आफ्नो शरीर सुम्पन तयार उहाँ अत्यन्तै साहसी हो, जसका लागि धेरै व्यक्ति तयार हुँदैनन् । हामी उहाँको परिवारप्रति पनि आभारी छौं, जसले यी दुई महिनामा निकै साथ दिनुभयो ।
सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणपछि उनको आयु कति लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभए पनि जीवन बचाउन यो नै अन्तिम विकल्प रहेको बताइएको थियो । मेरिल्यान्ड युनिभर्सिटीले शल्यक्रियाका लागि अमेरिकी नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन(एफडीए) सँग आकस्मिक अनुमति लिएको थियो । शल्यक्रियाअघि बेनेटले भनेका थिए, ‘गर वा मरको अवस्थामा प्रत्यारोपण गर्न लागेको हुँ । म बाँच्न चाहन्छु । यो एउटा अँध्यारोमा हानिएको गोलीजस्तै हो । मसँग अरु विकल्प छैन ।’
मानव अंग प्रत्यारोपणमा देखिएको संकट समाधानका लागि यो अनुसन्धान सहयोगी हुने र यसमा अझै खोजी गर्नपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । अहिले पनि १ लाख १० हजारको हाराहारीमा अमेरिकामा अंग प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन् ।
गण्डकीको बजेट अधिवेसन जेठ ११ देखि
नेवार बस्तीको रैथाने भोटको डरमा बालेन समर्थक
कहिल्यै मत छिटो नगन्ने निर्वाचन आयोग